Uyikhetha njani iFirm yeNkqubo yoPhuhliso lweSoftware | Martech Zone
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, wonke umntu wayefuna ukuba nekona yakhe encinci ye-Intanethi kunye newebhusayithi eyenziwe ngokwezifiso. Indlela abasebenzisi abasebenzisana ngayo ne-Intanethi iyatshintsha ibe zizixhobo eziphathwayo, kwaye usetyenziso luyindlela ebaluleke kakhulu kwiimarike ezithe nkqo zokubandakanya abasebenzisi bazo, ukukhulisa ingeniso, kunye nokuphucula ukugcinwa kwabathengi.
A Ingxelo yeKinvey ngokusekwe kuvavanyo lwee-CIOs kunye neeNkokheli zeMobile ezifumanise ukuba uphuhliso lwesicelo esiphathwayo zibiza imali eninzi, ziyacotha, kwaye ziyadanisa. I-56% yeenkokheli ezihambayo ezivavanyiweyo zithi kuthatha iinyanga ezisixhenxe ukuya ngaphezulu konyaka omnye ukwakha usetyenziso olunye. I-7% ithi bachitha i- $ 18 ukuya ngaphezulu kwe- $ 500,000 nge-app nganye, nge-avareji ye- $ 1,000,000 ye-app nganye
Inkampani elungileyo yophuhliso inokwenza okanye yaphule impumelelo yeapp, eyenza ukukhetha ilungelo libe yinxalenye ebalulekileyo yenkqubo. Akunyanzelekanga ukuba ube yinjineli yesoftware ukuze wenze izigqibo ezifundisiweyo apho ifemi yophuhliso ilungele eyona projekthi yakho. Nazi ezinye zeendlela ezilungileyo onokuthi uzithathele ingqalelo xa udibana nababoneleli abanokubakho.
Ngaba Ukuqina Kwakho Kuyakuhlangula Into Oyifunayo?
Inkampani enobuchule, enamava inephothifoliyo enkulu. Ngcono nangakumbi-baneepotifoliyo enezinto ezinxulumene nombono wohlelo lwakho lokusebenza. Iphothifoliyo elungileyo ekufuneka uyijongile inikiwe, kodwa uya kuziva ukomelela kwimigangatho yoyilo yenkampani ukuba uyakwazi ukujonga izinto ezifanayo naleyo uyikhangelayo. Umzekelo, masithi ufuna usetyenziso olufumana ezona zihlangu zibalaseleyo kubafazi beshishini. Ifemi kufuneka ikwazi ukubonisa ezinye ii -apps ezinxulumene nokuba kukuthenga okanye kwi-ecommerce- amanqaku ebhonasi anamava ngokuthenga izihlangu.
Ungalibali ukuba nabo bafuna amava okubhalwa kweqonga ofuna ukulisebenzisa ukwenza iapps yakho. Uninzi lweziqalo ziqala ngokusungula iapps kwiqonga elinye kwaye bandise ukuya kwelandelayo bakube besazi ukuba iapp iphumelele kwivenkile yeapp. Thatha umdlalo odumileyo uClash of Clans ovela kwi-Supercell evelise ngaphezulu kwe- $ 2.3 yezigidigidi kwiminyaka nje eyi-6. Umdlalo iqaliselwe iApple iOS emva koko umdlalo uye waba yimpumelelo ebonakalayo. Le nkqubo inciphise inani lenkxaso kunye neentloko ezifunekayo ukuze kuphehlelelwe umdlalo, ukuze abaphuhlisi beapps kunye nabadali bangajolisa kuphuculo kubasebenzisi bayo endaweni yeebugs zobuchwephesha kunye nokulungiswa kumaqonga amaninzi.
Uninzi lweziqalo zinesicwangciso esifanayo somdlalo, kwaye inkampani yakho yophuhliso kufuneka ibe namava awomeleleyo kwiqonga ekujoliswe kulo. Amafemu ophuhliso ahlala enamaqela ane-iOS kunye namava e-Android, kodwa qinisekisa ukuba iqela lakho ziingcali kwiqonga ekujolise kulo.
Ukusebenzisana kunye noNxibelelwano zizitshixo zempumelelo
Njengomyili weapp, ulicandelo elibalulekileyo kuyo yonke inkqubo yophuhliso losetyenziso. Abanye abadali bee-app bacinga ukuba banokuhambisa uluvo lwabo kwinkampani yophuhliso, bafumane uhlaziyo veki nganye kwaye balibale malunga nokunye. Ngapha koko, umdali kufuneka asebenzisane ngokusondeleyo nefemi elungileyo ukuqinisekisa ukuba umbono ucacisiwe gca kubaphuhlisi.
Sicinga ngathi njengamaqabane abathengi bethu, sibakhokela kumava ophuhliso lweapp. Oku kuthetha ukuba asiyiyo ivenkile yokumisela-kwaye-ulibale, nokuba; abathengi bethu kufuneka bazinikezele ekuthatheni inxaxheba kwiingxoxo zokusebenza, ukukhulisa izigqibo, nokunye okuninzi. Siboleka ubuchule bethu, ewe, kodwa umxhasi ubandakanyeka kuwo onke amanyathelo endlela. Yinkqubo yokusebenzisana yokwenyani yabo bonke ababandakanyekayo. Keith Shields, CEO, Uyilo
Yonke inkampani inendlela yayo yokujongana neprojekthi yeapp, kodwa ezona zilungileyo zihlala phantsi kunye nomdali, zibancede badlulisele umbono wabo ephepheni, kwaye babhale phantsi iinkcukacha ngaphambi kokuba kuqale ikhowudi. Ngenxa yokuba iqela lophuhliso litsha ngokupheleleyo kwingcinga, eli nyathelo libaluleke kakhulu kwaye lifuna ukusebenzisana okuhle phakathi kwala maqela mabini.
Abaphuhlisi bakho baya kudinga ixesha lokuyila kunye nekhowudi yeprojekthi, kodwa iqela kufuneka libe nomphathi weprojekthi ofumanekayo ukuze athethe xa unemibuzo.
Cinga ngokuqina kophuhliso lwakho njenge iqabane kunye nenxalenye yeqela elizisa uluvo lwakho lokusebenza ebomini.
Amava oMsebenzisi angaphezulu kweMizobo kunye noBeko
Iminyaka, ujongano losetyenziso lwalunikwa amava omsebenzisi. Ezi zimbini zazisetyenziswa ngokutshintshisanayo, kodwa isidingo sokwahlulahlulahlulahlulahlulwe kwimiba yoyilo kunye nokwenza icandelo elitsha lokufunda. Abadali bohlelo lokusebenza abatsha bahlala befumana amava omsebenzisi kunye nomsebenzisi ujongile. Ujongano lomsebenzisi ngamaqhosha, uyilo kunye noyilo olunxibelelana nomsebenzisi wakho. Amava omsebenzisi kulula ukusetyenziswa kunye nokunxibelelana okunomdla okubonelelwa zezi zinto.
Umzekelo, unokuba neqhosha elingenisa ulwazi. Iqhosha liyinxalenye yomsebenzisi. Ngaba umsebenzisi uyaqonda ngokupheleleyo ukuba eli qhosha lisetyenziselwa ukungenisa ulwazi kwaye linokufumaneka ngokulula kwiphepha? Eli licandelo lamava omsebenzisi. Amava omsebenzisi abaluleke kakhulu ekubandakanyekeni komsebenzisi, okuqhuba ukufakwa kunye nokugcinwa komsebenzisi.
Inkampani yakho yophuhliso kufuneka ijolise ngokucacileyo kwi-UI (ujongano lomsebenzisi) kunye ne-UX (amava omsebenzisi). Kuya kufuneka babe nokuqonda okucacileyo koyilo olunomdla olunceda abasebenzisi ukuba basebenzise ngokungcono usetyenziso.
Mhlawumbi ubuza ukuba ungayazi njani into enjalo? Kuba unayo iphothifoliyo yenkampani, unokufumana ukuba basebenza njani ne-UX ngokukhuphela usetyenziso lwabo ngokukhethekileyo kwiqonga ofuna ukujolisa kulo. I-Android kunye ne-iOS zinobuqili bokuyila, kwaye ezi zinto ziyaqondwa ngabasebenzisi abanomdla. Khuphela usetyenziso, sebenzisa amanqaku alo, kwaye uvavanye ukuba uyilo luyinto enomdla kwaye lwenza kube lula ukuhamba.
Kwenzeka ntoni ngexesha lokuSebenza?
Kukho iifemu eziza kugqithisa ikhowudi yemvelaphi kwaye ziyishiye kumthengi ukuze zibone ezinye, kodwa oku kusebenza kuphela ukuba umenzi weapp uneqela langaphakathi, labaphuhlisi okanye unamava eapp. Olukhetho olungcono kukuqina okunyathela kwinkqubo ukusuka kumaxwebhu osetyenziso kunye noyilo lokuhambisa usetyenziso. Ukushiya umthengi ukuba ajongane nokusasazwa kuphela ayigqibi ngokupheleleyo iprojekthi, kwaye abaphuhlisi kufuneka babekhona ukukhokela umthengi ngenkqubo.
Uya kuba nentlanganiso yokugqibela apho imveliso egqityiweyo ithiwe thaca. Nje ukuba usayine, lixesha lokuba ususe usetyenziso ukusuka kwindawo yophuhliso uye kwimveliso. Udinga iiakhawunti zonjiniyela kwiivenkile eziphambili zohlelo lokusebenza, kodwa inkampani elungileyo iyanceda ukuhambisa intshukumo.
Ivenkile nganye yeapp ineemfuno zayo, kwaye ifemu yophuhliso olufanelekileyo iyazazi ezi mfuno ngaphakathi ngaphakathi. Banokunceda umdali alungiselele ukulayishwa njengokufumana imifanekiso yentengiso ilungile, ukudibanisa nayiphi na kubahlalutyi ikhowudi, kwaye ulayishe ikhowudi yemvelaphi kwindawo efanelekileyo.
Kuya kufuneka wenze udliwanondlebe kwaye udibane namafemu ophuhliso lweeapp ngaphambi kokuba ufumane olungileyo. Kuya kufuneka uzive ukhululekile ngokuqina okukhethileyo kwaye uzive unentembelo yokuba banokuyiphatha iprojekthi yakho ngobungcali kunye nokuzinikezela.
Ukwenza oku ngokubuza imibuzo emininzi- uninzi njengoko ufuna malunga neapp kunye neenkqubo abazisebenzisayo ukwenza iprojekthi yenziwe. Ungajonga nokujongwa ukuba banako. Ungaya ekuhlaleni okanye ufumane i-intanethi eqinileyo, nokuba ukhetha ntoni xa umsebenzi uphathwa ngokufanelekileyo kwaye upapashwe ngee-hassles ezincinci kumthengi kangangoko.
tags: umphuhlisi wosetyenziso lweselfowuniukuphuculwa kwesoftware